MRDA ဆိုတဲ့မြန်မာ့တော်ဝင်နဂါးတပ်တော်..(ပြည်သူတွေ စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့……) – OK Media
March 8, 2022 Ok MediaLeaveaComment on MRDA ဆိုတဲ့မြန်မာ့တော်ဝင်နဂါးတပ်တော်..(ပြည်သူတွေ စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့……)
MRDA ဆိုတဲ့မြန်မာ့တော်ဝင်နဂါးတပ်တော်ဟာ NUG ရဲ့ပံ့ပိုးမှု ပြည်သူလူထုရဲ့ ဝန်းရံအားဖြည့်မှုနဲ့အတူ ပြည်သူတွေမျှော်လင့်တဲ့လွတ်လပ်ရေးပန်းတိုင်ဆီကို ရောက်အောင်ချီတက်မှာပါ……
NUG ဟာလည်း အားနည်းချက်တွေကိုပြုပြင်ရင်း အခက်အခဲ ပြဿနာအမျိုးမျိုးကိုကျော်ဖြတ်ပြီး မြေပြင်က ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လက်နဲ့ ကောင်းကောင်းချိတ်ဆက်လာနေတာတွေ့ရတယ်…….
လက်နက်တပ်ဆင်မှုအပိုင်းတွေကြိုးစားစီစဉ်လာနေပါတယ်……ဘာပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ ငါတို့မှာ ငါတို့ပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားလို ကျွန်ုပ်တို့ပြည်သူနဲ့ ကျွန်ုပ်တို့ (NUG) အစိုးရ အားနည်းချက်ရှိကြရင်လည်း အပြန်လှန်ပြုပြင်ရင်း လက်တွေမြဲထားရမှာပါ……
မကောင်းရင်ပြင် မစွန်ရင်ပြောင်းဒီပွဲအောင်နိုင်ကြောင်းကတော့ ကျွန်ုပ်တို့တတွေဟာ လက်တွဲကိုတွဲပြီးတိုက်ရမှာပါ……အခုလက်ရှိလည်း ကျွန်ုပ်တို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့၊ ကျွန်ုပ်တို့ပြည်သူ‌တွေနဲ့ ကျွန်ုပ်တို့အစိုးရ (NUG) ဟာ အချိတ်ဆက်ပိုမိလာပြီး ပိုမိုအားကောင်းလာနေပါပြီ……
နိုင်ငံရဲ့လိုအပ်ချက်အရပေါ်ပေါက်လာရတဲ့ အရေးပေါ်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်နေတော့ လိုအပ်ချက်တွေတော့ရှိခဲ့ပါတယ်……
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့မဟာမိတ်တွေဆီမှာလည်း (NUG) ဘက်က အထောက်ပံ့တွေပေးလာနေတဲ့ သတင်းတွေဝမ်းသာအားတက်ဖွယ် ကြားနေရပါတယ်…..
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့ပြည်သူ့အစိုးရ (NUG) ဟာ အာဏာလုအကြမ်းဖက်အုပ်စုကိုကျော်လွန်ပြီး နိုင်ငံရေးအသာစီးရယူဖို့ကြိုးပမ်းအားထုတ်ရာမှာလည်း အောင်မြင်နေပါပြီ…….
ကိုယ့်ပြည်သူနဲ့ ကိုယ့်အစိုးရ အချိတ်ဆက်မိမိနဲ့ ပြည်သူ့ဘဝလွတ်မြောက်ရေးကိုကြိုးစားပေးနေပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာ အားလုံအနေနဲ့ကလည်း ရန်သူ့ရဲ့လှည့်ကွက်တွေကို သတိကောင်းကောင်းထားပြီး လမ်းကြောင်းမှန်မှန်ဝန်းရံလိုက်ပါပေးကြရင်း လွတ်လပ်ရေးပန်းတိုင်ဆီ ကိုယ်စီတာဝန်ယူချီတက်ကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါတယ်…….